မျက်နှာအသားရေလေးကို ကြည်လင်လာစေမယ့် နှိပ်နယ်နည်းလေးတွေ | CosmeticMyanmar
Home » Article » မျက်နှာအသားရေလေးကို ကြည်လင်လာစေမယ့် နှိပ်နယ်နည်းလေးတွေ
စိတ်တွေပင်ပန်း ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးညောင်းညာနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာကို အတမ်းတဆုံးဖြစ်မလဲ? သေချာတာကတော့ message ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု အမှန်အကန်လိုအပ်မှာပါပဲ။ နှိပ်နယ်တာကတော့ အညောင်းညာလည်းပြေစေတဲ့အပြင် စိတ်ကို အပန်းပြေစေနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ နှိပ်နယ်တာတွေအများကြီးရှိတာကြောင့် အဲ့ထဲကမှ မျက်နှာလေးကို နှိပ်နယ်ပေးတာကလည်း အကျိုးထူးစေတဲ့ အရာလေးပါပဲ။ ဒီတော့ မင်မင်က မျက်နှာလေးကို ဘယ်လိုလေးတွေနှိပ်နယ်ပေးရမလဲ? ဘယ်လိုလေးတွေအကျိုးထူးစေလဲဆိုတာတစ်ချက် ပြောပြပေးမှမို့ ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးနော်။
Facial Message ကို ဘာလို့လုပ်ရတာလဲ?
မျက်နှာမှာရှိတဲ့ သွေးကြောလေးတွေ သွေးလှည့်ပတ်မှုတွေကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ သွေးကြောလေးတွေသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမှ မျက်နှာလေးက ကြည်ကြည်လေးဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ် အပေါ်ယံကနေလိမ်းလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း အတွင်းထဲထိ စိမ့်ဝင်ပြီး လိမ်းသမျှအဖတ်တင်တာပေါ့နော်။ အသားရေကို အပေါ်ယံကနေပဲ ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ပဲ အတွင်းထဲကနေပါပြုပြင်ပေးလို့ မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့ တကယ့်ကိုလိုအပ်တဲ့ treatment လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။
Facial Message ကတော့ ပြောရရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိတာလေးတစ်ခုပဲ ဟိဟိ။ ပြောပြပေးမှာပေါ့ စိတ်မပူပါနဲ့။ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ပဲလုပ်လို့ရသလို ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ အခုကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ လက်လေးတွေနဲ့ပဲလုပ်ရမှာဆိုတော့ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။
အခုလည်းနှိပ်နည်းလေး ၃ မျိုးကို လက်တို့ပေးမှာမို့ အိမ်မှာတင်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရပြီနော်။
ညာဖက်လက်နဲ့ မေးရိုးနေရာကို အပေါ်ကိုဆွဲတင်တဲ့ ပုံမျိုးနဲ့ ပင်တင်ပေးပါ။ နားရွက်နောက်ထိဆွဲတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့2စက္ကန့်လောက် ရပ်ထားပေးပါ။ နားရွက်ထိရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ လည်ပင်းအောက်ကို ဆင်းလာပြီး အဆုံးသတ်လို့ရပါပြီ။ တစ်ဖက်တည်းကို ၃ ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးပြီးတော့ နောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းပေးပါ။
နောက်တစ်နည်းကတော့ မေးစေ့နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ အချစ်တို့အတွက်ပါ။ တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေက ပိန်ပေမယ့်မျက်နှာကမေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့လေးတွေအတွက် ဒီနှိပ်နည်းလေးကတော့ တော်တော်အသုံးဝင်မှာပါ။
လက်ကို နားရွက်နားထိဆွဲတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နားရွက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ စိတ်ထဲကနေ ၆ စက္ကန့်လောက်ရေတွက်ပေးပြီးမှ မေးစေ့နားကို ပြန်သွားပေးလိုက်ပါ။ မေးအဆီများနေသူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ နှိပ်နယ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၃ ကြိမ်ကနေ ၅ ကြိမ်ထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးနည်းလေးကတော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို နှိပ်ပေးတဲ့နည်းလေးပါ။
နှာခေါင်းနားကနေစပြီးတော့ မျက်နှာကို အလျားလိုက်အသာလေးဆွဲပြီးတော့ နားထင်ရောက်တဲ့ထိ ဆွဲသွားပေးရမှာပါ။ အားကိုအရမ်းသုံးစရာမလိုပါဘူးနော်။ ဖွဖွလေးနဲ့ပဲ နှိပ်နယ်ပေးရမှာပါ။
ကဲဒါလေးတွေကတော့ မျက်နှာနှိပ်တဲ့ ၃ နည်းဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားစရာတစ်ခုကတော့ နှိပ်နယ်ခါနီးရင် အဆီတစ်မျိုးမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ moisturizer တစ်မျိုးကိုလိမ်းပြီးမှ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဒါမှမျက်နှာလေးက ချောပြီးတော့ ဆွဲရင်ဆွဲသလောက် အဆင်ပြေမှာပါ။ နှိပ်နယ်တဲ့အခါမှာလည်းလက်အားကို ဖိသုံးလို့မရပါဘူး အဲ့လိုသုံးလိုက်ရင် အရေးကြောင်းတွေတောင်ထင်စေနိုင်လို့ ဖွဖွလေးပဲ နှိပ်နယ်ပေးပါ။
အဆင်ပြေမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ အလှအပရေးရာအဖြာဖြာကိုတင်ဆက်နေတဲ့ cosmeticmyanmar page လေးကို like လုပ်ထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော်။
Tags: facial message